Ngwa ngwa zukọta n'ala atọ Flat Pack Container Hotel-Prefab house-NANTONG GAOYA STEEL STRUCTURE CO., LTD.
Osisi na Equipment
ndi nkiti na
Sanwichi Panel na Mpempe akwụkwọ Steel
Nkebi Nke Agba Steel H, M）
Nantong GAOYA ígwè Structure CO., LTD.
NANTONG GAOYA INTERNATIONAL TRADING CO.LTD. Ọkachamara na emebe,amị na na na wụnye iche iche nke ụlọ,na ndị ọzọ na usoro.
Home>ngwaahịa>ndi nkiti na>Flọ Prefab
Ndenye Ezukọta Atọ Ala Ewepụghị Pack Container Hotel
Kedụ uru dị na iji igbe dị larịị wee wuo ụlọ nkwari akụ
A na-eji igbe mbupu ebufe ngwongwo na ibu na gburugburu ụwa n'enweghị nsogbu. Ọ bụ ebe siri ike na-adịgide adịgide ma sie ike. Ewepụghị mkpọ akpa sitere na mbupu mbupu.
Ngwurugwu nke ngwugwu mkpọ dị larịị na-enye onye nrụpụta nhọrọ dị iche iche na imewe oghere, ma nwee ike inwe ọtụtụ njikọ na mgbanwe. Ya mere, ọdịdị ya adọtala ọtụtụ ndị na-atụpụta ụkpụrụ ụlọ ka ha wee chọpụta ụzọ ọhụrụ ha ga-esi mepụta ihe ọhụụ ma na-ebute ụzọ ọhụụ ọhụụ. Ngwunye mkpọ dị larịị dị mfe ibufe ma nwee ike imeghari gburugburu ebe obibi. Enwere ike ijikọ ya nke ọma n'ime ụdị oghere dị iche iche, dị ka Hotels, gọọmenti rụrụ, ezinụlọ, etc.
A maara nke ọma na ụlọ mkpọ mkpọ larịị ewetala nnukwu enyemaka na ndụ anyị. Enwere ike ịsị na agbakwunyere ihe ọhụrụ na ụlọ ọrụ ihe owuwu. Hotellọ nkwari akụ dị larịị amalitela nke ọma na ụlọ ọrụ na-ewu ụlọ ma ndị mmadụ kwadoro ya. Ugbu a, ọtụtụ ụlọ oriri na ọ createụ hotelụ ga-emepụta ụlọ oriri na nkwari akụ nke ha. Kedụ uru ndị dị n'ụdị họtel mkpọmkpọ ụlọ a nwere maka ndị mmadụ ịchụso?
First, ihe na-adịgide adịgide ma ọ dịghị mfe nrụrụ
Ngwongwo mkpọ dị larịị nke ụlọ nkwari akụ na-eji ígwè, nke nwere ike iguzogide ụfọdụ ọdachi ndị na-emere onwe ha ma ọ gaghị agbanwe. Onye mmebe ahụ nwere ike ịmepụta ụlọ pụrụ iche dịka echiche nke aka ya, nke nwere ike ịdọta ndị njem nleta ka ha biri.
Nke abụọ, o nwere nlezianya n'ichepụta teknụzụ
Buildinglọ ọdịnala nwere ike ịpụta dị ka ihe na-asọ oyi mgbe ogologo oge ojiji, ma ụlọ mere nke ewepụghị mkpọ akpa nwere nlezianya n'ichepụta technology, nke ga - eme ka ụdị ụlọ a na - ebugharị ga - egosi arụmọrụ kacha mma, mmiri agaghị ehi mmiri mgbe udu mmiri.
Nke atọ, ugboro iji ya dị elu
Hotellọ nkwari akụ mkpọmkpọ ebe dị larịị na-eji nchara dị ka chassis, ma wee nweta ọtụtụ nchikota oghere dị ka echiche imewe nke ụlọ nkwari akụ ọ bụla, n'agbanyeghị ụdị nke enwere ike ịhazi, ọ nwere ike izute mkpa nke onye ọrụ ọ bụla, ma mepụta mkpokọta mkpokọta mkpokọta mkpokọta ewepụghị maka nhazi ga-eme ka ndụ ọrụ ahụ dị ogologo.
Nke anọ, nchebe akụ na ụba na gburugburu ebe obibi
Ojiji nke ihe eji ebu ihe di elu enweghi ike igbusi oge owuwu ya kamakwa chebe onu ahia. N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ị naghị eji ya, I nwekwara ike ebukọta ma jigharị, nke nwere uru dị ukwuu maka nchebe gburugburu ebe obibi anyị na-agbaso.
Gaoya nwere ebe eji emepụta ya na otu ọkachamara maka ịwuwu ihe. Anyị na-akasi obi na mmepe na-ewu nke ígwè ọhụrụ Ọdịdị ụlọ na nkwalite na ngwa nke ọhụrụ ụlọ ihe. Otu ụlọ ọrụ ahụ nabatara echiche ụlọ na nke mba ọzọ kachasị ọhụrụ, dịka usoro nhazi nke mba na ụkpụrụ ụkpụrụ na-eji ihe mgbidi ọhụụ iji mepụta ụlọ ụlọ kachasị ọhụrụ maka ndị ahịa, ma nye teknụzụ zuru oke na ngwọta ụlọ; committed to China's green environmental protection Housing construction, imepụta ihe ohuru ma di nma nke izu ike na ulo obibi.
Easy nzukọ abụọ storey akpa ụlọ
Kwadebere Galvanized steel Coil (PPGI)
Nantong Gaoya Steel Structure CO., Ltd. e guzobere na 1996, emi odude ke mara mma,ọgaranya na longevous obodo,Nantong,nke dị nso Shanghai.
Rugao Baipu Industrial Park, Jiangsu Province (200 mita n'ebe ọdịda anyanwụ nke Baipu Railway Station)
Copyright © Nantong GAOYA ígwè Structure CO., LTD.. Meeall kwadoro